Dubai na Abu Dhabi ka a na-ewere na ọ bụ ndị njem nleta kachasị mmasị na ya, ọ bụ ya mere ụlọ ndị kasị dị oké ọnụ ma dị mma na UAE dị n'ebe a. N'ebe a, ị nwere ike ịnọ na obere ụlọ ọrụ nkwari akụ nke ebe a ma ọ bụ na-ede ụlọ dị n'ime ụlọ nkwari akụ nke agbụ ụlọ nkwari akụ mba ndị a ma ama. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị nwere ike ịdabere na ọrụ dị elu, ọrụ kachasị mma na ahịa dị iche iche.
Ụdị na edemede nke hotels na UAE
N'akụkụ United Arab Emirates, e nwere nnukwu nhọrọ nke ụlọ ezumike nke 3-4-5 kpakpando, e nwekwara ụlọ ọrụ obodo ochie na 1-2 kpakpando. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ niile dị na UAE na-ekewa n'ime atọ dị ukwuu:
Na-aga n'ụsọ oké osimiri ma nwee ohere nke ha na ụsọ oké osimiri. N'ebe ndị njem nleta, ụlọ ọrụ ndị UAE na osimiri ha na-edu mgbe nile. A naghị eji ihe niile dị mkpa maka ụsọ osimiri (anyanwụ loungers, akwa akwa, igwe), ma ha adịghị enye ndị ọ bụla njem nleta ihe ọ bụla metụtara uwe na ịcha ahụ na osimiri.
Ndị njem na, ọ bụ ezie na ha dị n'ụsọ oké osimiri, anaghị enwe ụzọ dị iche iche n'ọdụ ụgbọ mmiri. N'ime ndepụta nke hotels na UAE, ị nwere ike ịhụ ebe mgbagwoju anya. Ka o sina dị, enwere ọtụtụ ndị njem nleta ebe a. Ndị nlekọta ahụ na-ekwurịta banyere ụlọ ọrụ nlekọta ụlọ ọrụ nke UAE na mbụ n'ụsọ oké osimiri ka ndị ọbịa ha nwee ike iji osimiri.
Obodo hotels, dịpụrụ adịpụ site n'ụsọ oké osimiri. Ha dị n'ebe dị anya site na oké osimiri ahụ, ma mee ndokwa ka ndị ọbịa jiri aka ha gaa n'èzí ọha ma ọ bụ ogige ntụrụndụ na osimiri nwere osimiri. N'adịghị ka ndị ọbịa nke hotels UAE na ịnweta oké osimiri, ndị ọbịa nke obodo hotels kwesịrị ịzụta ngwa ngwa osimiri dị iche iche, na ego ha.
Kedu otu esi họrọ otu họtel na UAE?
Ruo ugbu a, enweghi uzo doro anya nke nwere ike kewaa hotels nke obodo a kpamkpam n'ime ezin ul o, ntoro ma obu ahia. Ịhọrọ n'etiti otu ụlọ ọrụ kacha mma 4 ma ọ bụ 5 na UAE, ọ dị gị mkpa ilekwasị anya n'ihe ndị dị ka:
ego nke ndụ;
ọkwa nkasi obi;
Ọnụ ego nke ibi na ụlọ nkwari akụ dị na mpaghara na-adabere n'ịdị elu nke ndị mmụọ. Dịka ọmụmaatụ, ezigbo ụlọ ọrụ UAE na-emefu ego dị na Ras Al Khaimah na Fujairah , ya bụ, site na isi obodo - Dubai. Na nso ya bụ ụlọ nkwari akụ ahụ, ọnụ ahịa dị elu nke ibi na ya. Nke a bụ n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nleta , ụlọ ahịa na ntụrụndụ nke dị na obodo.
Banyere akụrụngwa akụrụngwa, a ghaghị ịtụle ya dabere na nzube nke njem ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ndị nwere ụmụaka kwesịrị ịkwụsị na hotels UAE na ogige ntụrụndụ n'ókèala. Nke a ga-enyere ha aka inwe ezumike ezinụlọ, nke ga-adọrọ mmasị maka onye ọ bụla so na ya. Site na otu ihe ịga nke ọma, ị nwere ike ịhọrọ hotels na UAE na mmemme nke na-enye gị ohere ịhazi oge ntụrụndụ ụmụaka.
Ememe na UAE na-ahọrọ ndị lụrụ ọhụrụ na ndị na-eto eto. Ọtụtụ n'ime ha na-anọ na mbara ala hotels nke UAE. N'ebe a, ị nwere ike ime ka izu ike dị jụụ, dee akwụkwọ dị iche iche, ịdọrọ mmiri, usoro ọbara ma ọ bụ gaa ọtụtụ ụdị baths. Ndị na-egwu nke ndị ọzọ na ndị na-eme ndụ na-ahọrọ na UAE, ụlọ ọrụ ndị ntorobịa na disko, nke ntụrụndụ anaghị akwụsị ọbụna maka nkeji.
Ndị njem nleta ezumike ga-aga n'ebe ọdịda anyanwụ nke mba ahụ. Ebe a bụ ụlọ ndị a ma ama na UAE - Marbella Resort na Golden Tulip Al Jazira, ebe ị nwere ike imikpu onwe gị na ntụrụndụ, na-enwe mmasị na anyanwụ n'akụkụ Oké Osimiri Persia.
Ulo oru n'adighi ala nke UAE
Onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla nwere ihe ndị dị na ya n'ụlọ ahịa họtel:
Abu Dhabi. Ulo oru nkwari akụ kachasị ukwuu na nke dị iche iche dị na Abu Dhabi. Enweghị ike ịkpọ ụlọ ọrụ ndị a na-akpọ greenest na UAE, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha na-elekwasị anya na mgbanaka artificial. Ma, ebe a, ị nwere ike ịhọrọ ụlọ nkwari akụ nke na-ele ọgbọ ahụ anya na yachts bara ụba ma ọ bụ egwu "Usoro 1".
Dubai. Mgbe Abu Dhabi gachara, ị ga-aga ileta ndị ahụ, nke ụlọ ndị a ma ama na UAE, bụ ndị e gosipụtara na ya n'okpuru ebe a. N'etiti ha, ndị a ma ama bụ Rixos The Palm Dubai na Atlantis Nkwụ. Obodo kachasị mma na UAE nọ na àgwàetiti Palma Jumeirah . E kere ya n'etiti Osimiri Persian n'ụdị nkwụ na-agbasa, nke a na-ahụ anya site na mbara igwe. Uzo ozo nke ozo di na Dubai bu ulo akwukwo mara amara na UAE - Burj El Arab, ma obu uzo . Ọ dị kpọmkwem n'etiti Oké Osimiri Persia, 270 m si n'ikpere mmiri. Enweghị ụlọ ọrụ na-adọrọ mmasị na UAE nọ na district Dubai nke Deira .
Ras Al Khaimah. Ugwu mara mma na okuku ala di oke mma bu ihe omuma nke ndi ahu. Ọ dị ihe dị ka 130 kilomita site na Dubai. Otu n'ime ụlọ ndị kasị ewu ewu na Ras Al Khaimah na UAE bụ Rixos Bab Al Bahr, na-arụ ọrụ na ụkpụrụ "ultra olynklyuziv".
Fujairah. A maara ebe ugwu nke dị n'ebe ugwu maka ihu igwe na-ekpo ọkụ, ya mere, osisi na ugbo dị iche iche dị iche iche, ndị ọzọ na-adọrọ mmasị. Obodo kachasị ama nke Fujairah 5 kpakpando na UAE, na-arụ ọrụ na usoro niile, bụ:
Siji Hotel Ụlọ.
Ụgwọ nke ibi n'ime ha bụ $ 107-165 kwa abalị. Dị ka ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ na UAE, ọnụahịa ahụ gụnyere nri atọ n'ụbọchị, mmanya na ọrụ maka ihe niile.
Sharjah. A na-eji iwu ndị dị oke egwu eme ihe ngosi a , mana, n'agbanyeghị nke a, ọ na-ewu ewu n'etiti ndị njem nleta ụlọ. Sharjah ụlọ ndị dị n'ụsọ oké osimiri na UAE nọ na ala Al Khan.
Ajman . Ọ dị nso na Sharjah, na Dubai si ebe a 1-1.5 awa ụgbọala. A maara Ajman na UAE maka otu ìgwè ndị anwụọcha Kempinski, nke dị n'ụsọ oké osimiri 1.
Atụmatụ Ụlọ Ahịa na UAE
Tupu ịdea ụlọ n'ime ụlọ nkwari akụ ọ bụla na Arab Emirates, ndị njem nleta kwesịrị ịmara banyere nsogbu dị iche iche nke idozi na ha:
E nwere $ 80-250 na ụlọ ọrụ UAE. Mgbe ha edozi, ha nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ọrụ, na mgbe ịlaghachiri nguzozi.
Kemgbe afọ 2014, ndị njem nleta bụ ndị biri n'ụlọ nkwari akụ na UAE, ọ dị mkpa ka ị kwụọ ụtụ isi, ego ole dabere na ụdị nke ụlọ nkwari akụ ahụ na ogologo oge ịnọ. A na-ebo ụtụ isi na ụbọchị nbanye.
N'agbanyeghi ma nke a bụ ulo oru ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ 2 nke dị ala na UAE, oge nkwụnye ego bụ oge 15:00. Mgbe ndị ọzọ, hapụ ya ruo ụbọchị 12:00 n'ụbọchị a chụpụrụ ya.
Ọ bụrụ na ịdee ụlọ maka ụbọchị asaa, ị nwere ike ịtụ anya na ị ga-agafe ebe dị n'etiti.
A na-amachibido mmanya na- aba n'anya na hotels nke Sharjah na UAE. Ụkpụrụ a dị irè na ọtụtụ ụlọ nkwari akụ ndị ọzọ na mba ahụ, ma ọ bụghị na niile.
N'oge ọnwa Muslim nke Ramadan na n'okporo ámá ndị na-agba mmiri, a naghị amachibido ịṅụ mmanya na-aba n'anya, na-aṅụ sịga na ọbụna na-egbu egbu. Iwu a na-emetụta ụlọ hotels halal na UAE.
N'ebe ọ bụla ọ na-asọ oyi, a machibidoro ya ịga ije na ọdọ mmiri na igwu mmiri n'èzí ụlọ nkwari akụ ahụ ma ọ bụ n'ụlọ nzukọ ya. Topless ebe a.
Ọtụtụ ndị na-eme njem nleta na-echegbu onwe ha banyere ajụjụ a na-etinye na ntọala ndị dị na hotels nke UAE. Ọtụtụ mgbe, ndị a bụ ụdị nke "G" nke Britain, nke nwere akara atọ. Ụfọdụ hotels nwere ndị ntanetị.
Ndị njem na-achọ ịma otu esi enweta visa na UAE site na nkwari akụ ahụ, ị ​​kwesịrị ịmara na taa enweghi ohere dị otú a. Enwere ike nweta akwụkwọ a naanị na mba gị site na consulate ma ọ bụ ụlọ ọrụ njem, ma ọ bụ tupu ị bịarute United Arab Emirates kpọmkwem na ọdụ ụgbọ elu .
N'afọ 2017, na UAE, a na-ememmemme ụmụaka Kids Free Free na atụmatụ nke ụlọ ọrụ ndị dị na mpaghara, bụ nke ụmụaka dị afọ iri na abụọ bi na Emirates ga-enwere n'efu. E kere ya n'ebumnobi nke ndị njem nleta na-agagharị na obodo ahụ na ezinụlọ dum, n'oge ha nwere ike iji ọrụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na-aga njem, gaa nleta ma sonye na ego na nkwalite nke ụlọ ọrụ njem.
Cuisine nke Saudi Arabia
Ememe na Israel
Anyụ - bara uru Njirimara na contraindications
Njirimara ọgwụgwọ nke basil
Ihe Edere Afọ Ọhụrụ Ụmụaka
Nri kuki "Afọ" nke afọ ọhụrụ - nri nri mbụ
Colic n'ime afọ ndị okenye
Eggplants dị ka mushrooms maka oyi
Kedu ihe ndị ikwu nwụrụ anwụ na-atụ banyere ya?
Sneakers na ejiji 2016
Kedu ka esi agwọ cystitis otu ugboro?
A gbahapụrụ Kanye West n'ụlọ ọgwụ
Yoga - utịp
Uwe Eke 2013
Otu esi choputa iko dika odidi ihu - obosara nke oma maka ụdị ihu
Ọkpụkpụ nchara 2017 - ejiji ejiji na echiche kacha mma
Akpụkpọ ụkwụ - mmiri-okpomọkụ 2015
Kedu ka esi etinye akwa n'elu Feng Shui?
Iwu nke Indonesia